सरल तरिकाले विकास दिसा गर्न नसकी बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नै कब्जियत हो । दिनमा एकपटक पनि सजिलोसँग दिसा गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने पनि कब्जियत भन्ने बुझ्नुपर्दछ । कब्जियत लामो समय रहिरह्यो भने विभिन्न साइड इफेक्टहरु रहन सक्छन् ।
कब्जियतका लागि धेरैले चूर्णको प्रयोग गर्छन्, जुन वास्तवमा सही तरिका होइन । कब्जियतको उपचार घरमै पनि सहजै गर्न सकिछ । यदी तपाईमा कब्जियतको समस्या छ भने सबैभन्दा पहिले यसको कारण थाहा पाएर यसबाट बच्नुपर्छ ।
राती सुत्नुअघि तातो दुधमा एक चम्चा घ्यू हालेर पिउन सकिन्छ । दुधमा चीनीको साटो मह वा मिश्री प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ । राती यो उपाय अपनाउँदा बिहान मज्जाले पेट सफा हुन्छ । तुरुन्त पेट सफा गर्न कागती पानीले पनि सहयोग पुर्याउँछ । एक गिलास मनतातो पानीमा एउटा कागती निचोरेर राती सुत्नुपूर्व पिउँदा बिहान तपाईंको पेट हल्का हुन सक्छ ।
चार चम्चा सूपमा एक गिलास पानीमा उमाल्ने र पानी चिसो भएपछि त्यसलाई छानेर पिउँदा पनि कब्जियतबाट राहत पाउन सकिने छ ।
यसो त बिहान खाली पेटमा स्याउ खाँदा यो रोगबाट चाँडै नै आराम मिल्छ । यस्तै प्रत्येक दिन काँचो पालुङ्गोको रस दुई पटक पिउँदा पनि केही दिनमा नै कब्जियत ठिक हुन्छ ।
कब्जियतबाट ग्रसित व्यक्तिले फलको अत्यधिक सेवन गर्नुपर्छ । मेवा, स्याउ, मौसम, नरिवल, सुन्तला, अंजिर, काँक्रो, गाजरलगायतका फलफूल खानुपर्छ । सागसब्जीको रस, ताजा फलफूलको रस, नरिवलको पानीले कब्जियतलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ ।
कब्जियत ठिक गर्नका लागि आहारमा हरियो सागसब्जी र आँटाको रोटी समावेश गर्दा हितकर हुन्छ । यसो त दैनिक तीनदेखि चार लिटर पानी पिउनु उत्तम हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
कब्जियतबाट बच्ने उपाय भनेकै आफ्नो आहारमा विशेष ध्यान दिने हो । यसका लागि खानालाई मज्जाले चपाएर खानुपर्ने हुन्छ ।
कसैलाई पुरानो कब्जियत छ भने घरेलु उपायका साथै खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । राम्रोसँग पेट सफा भएको छैन भने तारेको भुटेको खानेकुरा खानु उचित हुन्छ । साथै मैदा, बेसन र मसालेदार भोजन पनि नरादा राम्रो हुन्छ ।
बेलुकाको खाना सुत्नुभन्दा दुई वा तीन घण्टा अघि नै खानु, खाना खानु एक घण्टा अघि कम्तीमा एक गिलास पानी पिउनु उचित मानिन्छ ।
चिसो खानेकुराको अत्यधिक सेवन, फास्ट फूड र प्याक गरिएको खानेकुरा खानु, धेरै चिया वा कफी पिउने, समयमा दिसा नगर्नेलगायत कब्जियतको कारण हुन् ।
पाल्पामा पनि भेटिए डेंगुका बिरामी
फूटबल हेर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक भएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ
गाउँपालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क ल्याब सेवा शुरू
किन लाग्छ बाडुली ? वैज्ञानिकहरूसँग छैन सटीक व्याख्या !
चितवनमा ३१ जनामा डेंगुको संक्रमण
प्रदेशसभा सांसदलाई धमाधम ल्यापटप, विरोध गर्नेहरू पनि गुपचुप बुझ्दै धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सांसदलाई धमाधम ल्यापटप वितरण गरिरहेको छ । ल्यापटप खरिदको विरोधमा रहेका देखिएका सांसद नै अन्ततः चुपचाप ल्यापटप बुझिरहेका छन् । आफूहरूसँग सल्ल...
ट्रकको ठक्करबाट १ जनाको मृत्यु, १ घाइते
झूटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिने २ जना पक्राउ